ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ Tyrone သည်ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိများအားမရေမတွက်နိုင်အောင်အတ္ထုပ္ပတ္တိများဖော်ပြသည်
LB "အကောင်းဆုံးနာမည်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်မင်္ဂလာပါ“ ကျွန်ုပ်တို့၏ Tyrone သည်ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများသည်သူ၏ကလေးဘဝ မှစ၍ ယနေ့အထိထင်ရှားသောအဖြစ်အပျက်များကိုသေသေချာချာဖော်ပြသည်။
Tyrone ၏ဘဝနှင့်ထမြောက်ခြင်း။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် Dailymail, iTV, TbrFootball နှင့် eadt
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပရိသတ်အများစုဟာအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ပွဲ ဦး ထွက်မှာဘူဂေးရီးယားပရိသတ်တွေရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကြောင့်အရိပ်ထိုးခံခဲ့ရတဲ့ပထမ ဦး ဆုံးပွဲစဉ်မှာသူ့ကိုသိခဲ့ရတယ်။ သို့သော်အနည်းငယ်သောသူများသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသော Tyrone Mings အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုစဉ်းစားသည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Tyrone သည်ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
Tyrone Deon Mings ကိုမတ်လ 13 ၏ 1993 နေ့တွင်သူ၏မိခင်၊ Dawn Johnson နှင့်ဖခင် Adrian တို့မွေးဖွားခဲ့သည် AKA ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းဗာမြို့၏မြို့တော် Adie Mings ။ သူသည်လူမျိုးပေါင်းစုံနောက်ခံအမျိုးမျိုးရှိသောချစ်စရာကောင်းသောမိဘသုံး ဦး အနက်တစ် ဦး တည်းသောသားဖြစ်သည်။
Tyrone Mings မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံ - Dawn Johnson နှင့် Adie Mings ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် တွစ်တာ
Tyrone Mings သည်ဘာဘေးဒိုးစ်မှသူ၏ဖခင်ဘက်မှသူ၏မိသားစုမှဆင်းသက်လာသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဤသည်မြောက်အမေရိက၏ကရစ်ဘီယံဒေသတွင်တည်ရှိသောကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်သည်။ မင်းသိလား?… ၎င်းသည်နာမည်ကြီးအဆိုတော်၏မွေးရပ်မြေဖြစ်သည် Rihanna။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသောသကြားကိုလိုနီဖြစ်သည့်နိုင်ငံသည် 1807 ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအာဖရိကကျွန်ကုန်သွယ်ရေး၏အင်္ဂလိပ်စင်တာဖြစ်လာသည်။ ဒါကဘာဘေးဒိုးစ်မှလူမည်းနီးပါးအခြေချနေထိုင်သူများမှာ Tyrone Mings အဘိုးအဘွားများအပါအဝင်အာဖရိကအခြေချနေထိုင်သူများဖြစ်သည်။
Tyrone Mings မိသားစုမှဆင်းသက်လာကြောင်းရှင်းပြသည်။ Image Credit: WorldAtlas
Tyron Mings သည်အစောပိုင်းဘဝ၌ခက်ခဲသောဘဝများရှိခဲ့ပြီးသူသည်မိခင်နှင့်အစ်မသုံးယောက်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်အနေနှင့်သူသည်အမေနှင့်အဖေတို့အကြားကွဲလွဲနေသည့်ကြားမှဆက်ဆံရေးပျက်ပြားသွားသည်ကိုသူမျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက်သူ့အမေကသူနှင့်သူ့အစ်မများကိုယူသွားခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမရှိသောကြောင့် Chippenham (အင်္ဂလန်ရှိမြို့) ရှိသူ၏မိခင်၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်နေ့တွင် Mings နှင့်သူ၏မိခင်နှင့်ညီမများသည်သူတို့ဖြစ်ပေါ်စေသောအဆင်မပြေမှုများကြောင့်ထိုနေရာမှထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးအခြားနေရာတစ်နေရာသို့သွားရန်ပိုက်ဆံမရှိတော့ပါ။
သူ၏ဆင်းရဲသောမိသားစုနောက်ခံကိုရှင်းပြနေစဉ်နှင့်ကြီးပြင်းလာစဉ် ကွေးနနျးစကျအိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမိုးအကာတွင်နေထိုင်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့သည့်အခါဘဝသည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်ဟုသူကပြောသည်။ အမိုးအကာမှာရှိနေတုန်း Mings, သူ့အမေ Dawn နှင့်ညီအစ်မသုံးယောက်လုံးသည်အိပ်ရာနှစ်လုံးကိုမျှဝေပေးခဲ့သည်။
သူ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတလျှောက်တွင် Tyrone Mings နှင့်သူ၏မိခင်နှင့်ညီမများသည်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမိုးအကာတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အကြွေး: VoiceofOC & Daily Mail က
အမိုးအကာရှိလူတိုင်းမကျေနပ်ကြပါ။ အားလုံးနီးပါးကိုလူသိရှင်ကြားဝေမျှထားသည့်အတွက်မိခင်၊ နာမည်ပေးပါ…; အဝတ်လျှော်areaရိယာ၊ အိမ်သာများ၊
Tyrone သည်ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမိုးအကာတွင်နေထိုင်စဉ် Mings သည်သူ၏ဘ ၀ တွင်တစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်ကျောင်းတက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ကျောင်းမှအဝေးတွင်ဘောလုံးသည်သူ၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်ဝေးကွာခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောရင်းမြစ်ဖြစ်လာသည်။
Tyrone Mings ပညာရေးကိုဘောလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ HPR နှင့် DailyMail ကိုဂုဏ်တင်ပါသည်။
Tyrone Mings သည်အခြားကစားသမားများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်သူ၌စွမ်းရည်ရှိပြီးဘောလုံးနှင့်အတူသူ၏ဘဝမှတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသိသည်။ ထိုအခြိနျတှငျသူအခကျအခဲမြားကိုကွညျ့ရှု။ သူလိုချင်သညျ့အရာမှာဘောလုံးကိုအသုံးပွုခွငျးဖွစျသညျ။
ကောင်းမွန်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအစပြုရန်သူသည်ဒေသခံဘောလုံးကွင်းများသို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမကြာခဏဝင်ရောက်လာပြီးသူ၏ကုန်သွယ်မှုကိုခက်ခဲပြီးနိမ့်ကျသောနောက်ခံလူအဖြစ်လေ့လာခဲ့သည်။ သူကစားခဲ့စဉ်က Tyrone Mings ၏မိသားစုဇာတ်လမ်းကိုအိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမိုးအကာနှင့်သိသောပရိသတ်များကသူသည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ဦး တည်နေသည်ဟုသံသယမရှိသဖြင့်သူ့ကိုလေးစားမှုနှင့်အားပေးမှုအချို့ပြသခဲ့သည်။
Tyrone သည်ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
Southampton အကယ်ဒမီနှင့်အတူဘောလုံးစမ်းသပ်မှုများတက်ရောက်ရန်ကံကောင်းသော Mings အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုများကြောင့်ကံကောင်းခြင်းကိုသူ၏မိခင်နှင့်ညီမများ၏မာန်မာနမရှိခဲ့ပါ။ အသက်ရှစ်နှစ် (2001 နှစ်တွင်) တွင် Mings သည်အရောင်များဖြင့်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်အကယ်ဒမီတွင်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။
Tyrone သည်ဘောလုံးနှင့်အစောပိုင်းဘဝကိုပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ သူ၏ဆောက်သမ်တန်အကယ်ဒမီတွင်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် Dailymail
လာရောက်ပူးပေါင်းပြီးသည့်နောက်လူငယ်နောက်ခံလူအတွက်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် Tyrone Mings လူငယ်သည်အကယ်ဒမီအဆင့်များကြီးထွားလာရန်ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးသောအကယ်ဒမီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီထူးချွန်ဆုများရရှိခဲ့သည့် Alan Shearer, Gareth Bale စသည်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အတွက်နေရာများစွာအတွက်ကြီးမားသောယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ထုတ်ပယ်ခြင်းများကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်းများရှိခဲ့သည်။
2009 နှစ်သည် Tyrone Mings မိသားစုအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောနှစ်ဖြစ်သည်။ အလားအလာကောင်းသည့်ကာကွယ်သူကို Saints က 2009 (အသက် 15) မှလွှတ်ပေးလိုက်သည်။ အကယ်ဒမီကလူငယ်ဘတ်ဂျက်ကိုလျှော့ချလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်
Tyrone Mings သည် 'ဒါခေါ်ခြင်းကြောင့်သာမကသားကောင်ဖြစ်လာသည်။ဘတ်ဂျက်ဖြတ်တောက်“ ဒါပေမယ့်လည်းကလပ်အသင်းကသူ့ကိုအရမ်းပိန်ပိန်သေးတယ်၊ သူတို့ဟာအနာဂတ်မှာ6ပေ5လက်မကိုထုတ်ဖို့အမှားကြီးတစ်ခုလုပ်မိတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး (Tyrone Mings အမြင့်) hulking frame ကိုနှင့်လည်းအနာဂတ်အင်္ဂလန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကစားသမား။
Tyrone သည်ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - Fame ဖို့လမ်း
ဆင်းရဲသောမိသားစုနောက်ခံမှကြီးပြင်းလာပြီးဘောလုံးအကယ်ဒမီမှပယ်ချခံရခြင်းခံနေရသောမည်သည့်ဘောလုံးသမားမဆိုအလွန်နက်ရှိုင်းသောစိတ်ခံစားမှုနာကျင်မှုနှင့်၎င်းတွင်ရှိနိုင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များကိုကောင်းစွာသိလိမ့်မည်။ ဂိမ်းအတွက်ယုံကြည်မှုအနည်းငယ်သာရှိခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဆင်းရဲသော Tyrone Mills သည်သူ 15 ဖြစ်သည့်အခါဘောလုံးမှထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ် !!
Tyrone Mings သည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ Wiltshire အနောက်မြောက်ဘက်ရှိသမိုင်းဝင်စျေးကွက်ကြီးဖြစ်သော Chippenham တွင်အလုပ်ရှာခဲ့သည်။ သူ၏ပထမဆုံးအလုပ်မှာအရက်ဆိုင် (အများသုံးခန်းမ) ဖြစ်ပြီးသူသည်တစ်ပတ်ပေါင် 45 လစာအတွက်ပီတာ (ဘီယာဖြင့်) ထုတ်ယူခဲ့သည်။ ငွေတောင်းခံရန်အတွက်သူ၏ ၀ င်ငွေကိုဖြည့်ဆည်းရန် Tyrone သည်အခြားနေရာများတွင်အလုပ်ရှာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
မင့်စ်ကိုတင့်ဆွဲသော Chippenham ရှိ White Hart အရက်ဆိုင်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် EuroSports နှင့် TheSun
နောက်ဆုံးတွင် Mings သည်ပေါင်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးအလုပ်တစ်ခု (အပေါင်ခံအကြံပေး) တစ် ဦး ဖြစ်လာပြီးသူ၏ငွေတောင်းခံရန်လုံလောက်သောအလုပ်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ သူအလုပ်လုပ်နေစဉ် Somerset ရှိ Millfield ကျောင်းကို ၂ နှစ်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ၏နှလုံးသားမှငြင်းပယ်ခံရသောအဖြစ်အပျက်ကိုကြားပြီးနောက်ကျောင်းကသူ့အားဘောလုံးပညာသင်ဆုပေးရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Mings သည်သူ၏စိတ်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေပြီးဘောလုံးပြန်သွားခဲ့သည်။
Tyrone သည်ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - Fame to Rise
ကျောင်းမှထွက်ပြီးသည့်နောက် Mings မှပညာသင်ဆုကိုသူအား Gloucestershire ရှိ Yate Town သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာဆင်းရဲတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကသူ့လမ်းကိုစလိုက်တယ်။ 2012 ၏နွေရာသီတွင်သူ၏ဇာတိမြို့ Chippenham မြို့မှလက်ခံသည့်အခါသူသည်မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ သူသည်အသင်း၏စွမ်းရည်များကြောင့်ကစားသမားများထက်ပိုမိုများပြားလာသောကြောင့်သူသည်အခြားနေရာများတွင်စမ်းသပ်မှုများစွာတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့သည်။
Tyrone Mings ကိုဘောလုံးပညာသင်ဆုပေးခဲ့ပြီးဘောလုံးပြန်ကစားနိုင်ခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် TheSun
Cardiff City, Swindon Town, Portsmouth နှင့် Bristol Rovers မှာမအောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုများအပြီး Mings သည်ဘယ်တော့မှမသေဆုံးနိုင်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်သူ့ကိုကူညီရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော Ipswich နောက်ခံလူ Russell Osman ၏အာရုံကိုဖမ်းစားခဲ့သည်။ ကံကောင်းပါစေလို့ Osman က Ipswich မြို့သူဌေး Mick McCarthy ကို Mings ကိုတရားခွင်မှာဖိတ်ကြားခဲ့တယ်။
Ipswich မြို့မှာပြိုလဲမယ့်အစားသေးငယ်တဲ့နောက်ခံကာကွယ်သူကအစွမ်းအစမှအားကောင်းလာသည်။ သုညနီးပါးမှမထင်မှတ်သောသူရဲကောင်းဆီသို့ရွေ့လျားသွားပြီးသူ၏သူရဲကောင်း (destiny helper) ကိုသူ၏အထင်ကြီးလောက်သောပုံများဖြင့်ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့သည်။
Tyrone Mings သည်သူ၏ခွန်အားကိုအထင်ကြီးစေရန်ခွန်အားမှသည်ခွန်အားကြီးထွားလာသည်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် TheSun
သူသည် 2014 / 2015 ရာသီတွင်လ၏ချန်ပီယံလိဂ်ဆုကိုဆွတ်ခူးသောအခါသူ၏အောင်မြင်မှုများအစပြုခဲ့သည်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းကသူ၏လက်မှတ်ထိုးရန်ဒူးထောက်ဆုတောင်းခဲ့သည်။
26 ဇွန် 2015 တွင် Mings သည် AFC Bournemouth တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ နေရာများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုရှောင်ရှားရန်သူသည် Aston Villa သို့ချေးငွေပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကသူ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အလှည့်အပြောင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ ဗီလာတွင်အလွန်ကြီးမားသော 6-foot-5 နောက်ခံလူသည်ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့သည် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဖို့ meteoric မြင့်တက်။ သူဟာကြယ်ပွင့်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ် ဗီလာကို 2019 EFL ချန်ပီယံရှစ်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အက်တန်ဗီလာကိုရာထူးတိုးမြှင့်ပေးမှုကိုကူညီပြီးတဲ့နောက်မှာခိုင်မာတဲ့ပရိသတ်တွေအကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာတယ်။ အချိန်တန်တဲ့အခါသူဖြစ်လာတယ် အင်္ဂလန်မှာအပူဆုံးခုခံကာကွယ်ဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခု။ ဒီလိုမြင့်တက်မှုကြောင့်သူ့ကိုအင်္ဂလန်အသင်းမှာနေရာရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဘူလ်ဂေးရီးယားပရိသတ်များမှလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကျူးလွန်ခြင်းကြောင့်သူ့ကိုလွှမ်းမိုးထားသည့်အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားအသင်းပွဲ ဦး ထွက်ကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။
ကြည့်ရတာတစ်ချိန်ကအိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမိုးအကာတစ်ခု၌နေခဲ့သည့်သူငယ်လေးသည်ယခုဘောလုံးပရိသတ်များ၏မျက်လုံးများရှေ့တွင်ပွင့်လန်းနေသည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Tyrone သည်ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - relationship ဘဝ
သူသည်ကျော်ကြားမှုမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အင်္ဂလန်ပွဲ ဦး ထွက်တွင်ဘောလုံးပရိသတ်များသည်မည်သူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း Tyrone Mings ၏ရည်းစားကိုမေးမြန်းခဲ့ကြဖွယ်ရှိသည်။ သူ၏ကျော်ကြားမှု၊ ချစ်စရာရုပ်သွင်သည်6ft5အမြင့်နှင့်အတူသူနှင့်မတူနိုင်သည့်အချက်ကိုငြင်းဆိုစရာမလိုပါ။
Tyrone Mings ရဲ့ချစ်သူဆိုတာဘယ်သူလဲ
သို့သော်အောင်မြင်သောဘောလုံးသမားနောက်ကွယ်တွင်အနည်းငယ်သာလူသိများသည့်နာမည်ကျော်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိသည်။ အမှန်တရား - စာရေးနေစဉ် Tyrone Mings ၏လျှို့ဝှက်အချစ်ဇာတ်လမ်းများသည်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝသည်အလွန်တိတ်ဆိတ်။ ဒရာမာဇာတ်လမ်းကင်းသောကြောင့်အများပြည်သူ၏မျက်လုံးကိုစစ်ဆေးခြင်းမှလွတ်မြောက်စေသည်။
Tyrone သည်ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Tyrone Mings နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းသည်လယ်ကွင်းရှိသူ၏လုပ်ဆောင်မှုများမှသူ၏ဘဝမှသူ၏ဘဝသည်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံဖော်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Mings သည်ခက်ခဲသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးထိုးထွင်းသိမြင်လို။ ကြီးမြတ်မှုကိုရှာဖွေရန်စိတ်ကူးယဉ်တတ်သူဖြစ်သည်။ သူသည်ဘောလုံးမှဝေးကွာသောအားကစားရုံ၌သူ၏လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုလေ့ကျင့်ရန်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးလေ့ရှိသည်။ ဘောလုံးအပြင်ဘက်တွင် Mings သည်မိမိကိုယ်ကိုစီးပွားရေးသမားတစ် ဦး အဖြစ်ရှုမြင်သည်။ မင်းသိလား?… သူသည် Bournemouth ရှိအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိသည်။
Tyrone Mings ၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုနားလည်ခြင်း။ IG မှဂုဏ်ပြု
Tyron Mings Personal Life တွင်သူသည်ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူတစ်ပါးကိုပြန်လည်အကျိုးပေးရန်မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲအခြားသူများကိုကူညီပေးလိုသည်။ လူအများစုကခရစ္စမတ်နေ့ကိုမိသားစုများနှင့်အတူပျော်ရွှင်ကြသည်။ Tyrone Mings နှင့်သူ၏ရည်းစားများအနေဖြင့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမိုးအကာများ၌အစားအစာနှင့်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရသောဒုက္ခသည်များအတွက်အချိန်ကိုပေးကြသည်။
Tyrone Mings သည်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမိုးအကာတွင်နေထိုင်သောလူများအားလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ကူညီခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်အကျိုးပြုသည်။ အကြွေး: Ipswich ကြယ်ပွင့်
Tyrone Mings ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုစာနာမှုဖြင့်ဖော်ပြပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။
Tyrone သည်ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - မိသားစုဘဝ
Tyrone Mings မှမိသားစုဇာတ်လမ်းကရုန်းကန်နေရသူများစွာကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကြီးမြတ်မှုကိုအောင်မြင်ရန်ရည်မှန်းထားသည်။မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဟုခံစားရရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာထ။ တစ်ခုခုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်' Tyron Mings သည်စာရေးခြင်းရေးသားစဉ်ကသူ့မိသားစု၏အတိတ်ကိုငွေရေးကြေးရေးလွတ်လပ်မှုဆီသို့ ဦး တည်ခဲ့သည်။ အခုသူ့မိသားစု ၀ င်တွေအကြောင်းပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်ကြပါစို့။
Tyrone Mings ခမည်းတော်အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်သင်ယူခြင်း - မိသားစုထဲမှာဘောလုံး Tyrone နဲ့ဘယ်တော့မှမတူဘူး။ မင်းသိလား?… သူ့အဖေ Adie Mings သည်ယခင်ကအသင်းမဟုတ်သည့် Bath City နှင့် Gloucester City တို့နှင့်အတူတိုက်စစ်မှူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ခွင့်လွှတ်ခံရသည့် Tyron Mings ၏နှလုံးသားသည်ဖခင်နှင့်သားနှစ် ဦး စလုံးအားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန်ကူညီသည်။ မင်းသိလား?… ဖခင်နှင့်သားနှစ် ဦး စလုံးသည်အလားတူကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ပင်ရှိနေသေးသည်။ Adie Mings သည်စာရေးချိန်တွင်ချယ်လ်ဆီးဘောလုံးအသင်းအတွက်ကင်းထောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။
Tyrone Mings ဟာသူ့အဖေ Adie Mings နဲ့အတူရှိနေပါတယ်။ Image Credit: Instagram
Tyron Mings Mother အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်လေ့လာခြင်း - Dawn Johnson သည်သူမနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်ခွဲခွာပြီးနောက်သူမ၏ဖခင်၏အမည်ကိုခံယူရန်ဖြစ်သည်။ အားကြီးသောမိခင်ကအရုဏ် ဦး ကအားနည်းနေသောဝံပုလွေများကသူ့ကိုရနိုင်အောင်အားမငယ်ပါနှင့်ဟုသားကိုမပြောပါ။ သူမသည်အစားသူ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်ကြီးမြတ်မှုအတွက်သူ၏ရှာပုံတော်တစ်လျှောက်လုံးသူ့ကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ စာရေးစဉ်တွင်လှပသော Dawn နှင့်သူ၏သားသည်ယခုပင်အကောင်းဆုံးဘ ၀ တွင်ပျော်မွေ့နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Tyrone Mings သည်သူ၏ Mother- Dawn Johnson နှင့်တွဲဖက်ထားသည်
Tyrone Mings မောင်နှမများအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်Mings ညီအစ်မများသည် Cherrelle Mings၊ Iesha Mings နှင့်အနည်းငယ်သာသိသောအခြားသူများဖြစ်သည်။ သူကြိုးစားခဲ့သည့်အချိန်တစ်လျှောက်လုံးသူအနားတွင်ရှိနေစဉ်သူ၏ညီမများကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်သည့်အနေဖြင့် Mings သည်သူ၏စကားများ၌တစ်ချိန်ကပြောကြားခဲ့သည် “ ကျွန်မမှာညီမလေးတွေရှိလို့ကြီးပြင်းလာတဲ့သူငယ်ချင်းတွေတကယ်လိုအပ်တယ်“ စာရေးနေစဉ်သူ၏နာမည်ကျော် Cherrelle Mings (Cherrelle Baram) အမည်ရှိသူ၏အစ်မတစ် ဦး သည်လက်ထပ်သည်။
Tyrone Mings သည်ချစ်စရာကောင်းသောအစ်မများဖြစ်သော Cherrelle (ဘယ်ဘက်) နှင့် Lesha (ညာ) တို့သည်သူတို့၏မိခင်၏အသွင်အပြင်ကိုလိုက်စားကြသည် .. Credit: IG
Tyrone သည်ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - လူနေမှုပုံစံစတဲ့
Tyrone Mings Lifestyle ကိုလေ့လာခြင်းသည်သင်၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ Tyrone Mings သည်အလွန်များပြားလှသောကားများနှင့်အိမ်များအလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်သည့်ထူးခြားဆန်းကြယ်သောဘဝပုံစံကိုမတွေ့ရပါ။ သူသည်ပျမ်းမျှဘောလုံးသမားတစ် ဦး ၏ကားကိုမောင်းနှင်သည်။
Tyrone Mings သည်ပျမ်းမျှထိပ်တန်းဘောလုံးသမားတစ် ဦး ကိုကားမောင်းသည်။ Image ကို Credit: IG
Tyrone Mings သည်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန်၊ ငွေရေးကြေးရေးအတွက်အသုံးစရိတ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးကိုအလုံအလောက်လုပ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာအားလပ်ရက်ခရီးသွားများအတွက်သူအကြိုက်ဆုံးနေရာဖြစ်သောလူကြိုက်များသောပင်လယ်ကမ်းခြေများတွင်ပျော်စရာကောင်းသောလူနေမှုပုံစံဖြင့်နေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင် Mings ၏ဓာတ်ပုံလှလှလေးကိုတွေ့ရစဉ်။
Tyrone Mings ၏လူနေမှုပုံစံ - သူသည်မိမိ၏ပိုက်ဆံများကိုပင်လယ်ကမ်းခြေ၌လှေစီးစီးရင်းပျော်မွေ့စွာနေထိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ Image ကို Credit: IG
Tyrone သည်ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - မရေမတွက်အချက်အလက်
သူသည်တစ်ချိန်ကသူ၏ရှပ်အင်္ကျီအဟောင်းဝယ်ယူသူကိုပရိသတ်များလျော်ကြေးပေး: တစ်ချိန်က 2014 တွင် Tyrone Mings သည် Aaron Cresswell West Ham United သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်သူ၏ရှပ်အင်္ကျီနံပါတ် No15 မှ No3 သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူ၏ပရိသတ်များကသူ၏ No15 ဂျာစီများကို ၀ ယ်ထားပြီး ဖြစ်၍ ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်အနည်းငယ်နောက်ကျသွားသည်။ မင်းသိလား?… Mings သည်အလွန်ရက်ရောသောကြောင့်သူနောက်ကျောတွင်ပုံနှိပ်ထားသော 15 နံပါတ်ပါသောရှပ်အင်္ကျီများ ၀ ယ်ခဲ့သောပရိသတ်များအတွက်ရှပ်အင်္ကျီအသစ်များ ၀ ယ်ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
Tyrone Mings- သည်သူ၏ကစားသမားဟောင်းနံပါတ်ရှိသည့်ပရိသတ်များအတွက်ရှပ်အင်္ကျီအသစ်များ ၀ ယ်ရန်ကတိပြုပြီးနောက်ကြီးမားသောအမူအကျင့်တစ်ခုအတွက်ချီးကျူးခဲ့သည်။ Image Credit- ဘီဘီစီ Glenn Parker / Tom PULLEN မှတစ်ဆင့်။
သူသည်တစ်ချိန်က Zlatan Ibrahimovic ၏ခေါင်းကိုတံဆိပ်ခတ်ခဲ့သည်။ Tyrone Mings သည် Zlatan Ibrahimovic ၏ခေါင်းကိုတံဆိပ်ခတ်နေသည်ဟုယူဆရသည်။ သူကZlatan“ Zlatan သည်နာကျင်မှုမရှိဟုခံစားခဲ့ရပြီးကစားပွဲသည်သူ၏စိတ်ကိုလက်စားချေရန်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တစ်ချိန်က Tyrone Mings သည် Zlatan Ibrahimovics ခေါင်းပေါ်တွင်တံဆိပ်ခတ်ခဲ့သည်။ အကြွေး: TheSun
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပွဲတွင် Zlatan Ibrahimovic သည် Mings ကိုလက်စားချေရန်အခွင့်အရေးယူခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်ဆွီဒင်အသင်းသည်ထောင့်ကန်ဘောအတွင်းတွင်သူ့ကိုတံတောင်ဆစ်ဖြင့် တင်၍ ကံကောင်းထောက်မစွာကသူ၏တံတောင်ဆစ်သို့ပြေးဝင်မိသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
Tyrone Mings နှင့် Zlatan Ibrahimovic ရန်ငြိုးထားခြင်း။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် အုပ်ထိန်းသူ
တံတောင်ဆစ်ရှိလင့်ကစား Tyrone Mings သည်ပိုမိုရှည်လျားသောတားမြစ်ချက်ကိုခံယူခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံနှိပ်ခြင်းဟာပိုလေးနက်တဲ့အင်္ဂလိပ်အက်ဖ်အေပြစ်မှုလို့သတ်မှတ်ထားလို့ပါ။ အောက်တွင် Mings သည် Ibrahimovic ၏ ဦး ခေါင်းကိုမတော်တဆနှိပ်စက်မိခြင်း၏ဗီဒီယိုအထောက်အထားများဖြစ်သည်။
Tyrone မှတက်တူးထိုးသည့်အချက်အလက်များ: Tyrone Mings ' ကိုယ်ခန္ဓာသည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသူ၏ပတ္တူစဖြစ်သည်။ သူ့တွင်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းဖြင့်“ မျက်လုံး၊ နာရီနှင့်ကလေး” သင်္ကေတများပါဝင်သောတက်တူးများသည်ကလေးဘဝတုန်းကအတွေ့အကြုံ၏အမှတ်အသားကိုဖော်ပြသည်။
Tyrone မင်တက်တူး။ Image Credit: JasonPixs နှင့် Instagram
Tyrone Mings ဘောလုံးအကယ်ဒမီ: Tyrone Mings တွင်“ ဘောလုံးအသင်းအကယ်ဒမီကျောင်းရှိသည်။Tyrone Mings အကယ်ဒမီအင်္ဂလန်၊ ဘာမင်ဂမ်တွင်အခြေစိုက်သည်။ အကယ်ဒမီသည်6နှင့် 16 ကြားရှိအသက် (ယောက်ျားရော၊ မိန်းမပါပါကလေးများ) ကိုလက်ခံသည်။ အကယ်ဒမီတစ်ခုထားရှိခြင်းသည်မိမိ၏ကုန်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ပြန်ပို့ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Tyrone Mings အကယ်ဒမီ။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် TMA
Tyrone သည်ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာအချက်အလက်များ - ဗီဒီယိုကိုအကျဉ်းချုပ်
ဤပရိုဖိုင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ဗီဒီယိုအကျဉ်းချုပ်အောက်တွင်ရှာပါ။ ကြင်နာစွာ လည်ပတ်ရန်နှင့်စာရင်းပေးသွင်းပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန် Youtube ကို Channel ကို. Notifications for subscription ကိုနှိပ်ပါ။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်နေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Tyrone သည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
ကို AFC Bournemouth ဘောလုံးဒိုင်ယာရီ
ရိုင်ယန် Sessegnon ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Marcus Rashford ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်